Ndị egwuregwu bọọlụ South America- Akụkọ nwata na akụkọ ifo
Home SOUTH AMERICA FOOTBALL ụmụaka
Nwa South America ọ bụla nwere egwuregwu Akụkọ nwata. Akụkọ ndị a jupụtara n’oge ndị na-agaghị echefu echefu ma na-atọ ụtọ ma na-emetụ n’obi. Ebumnuche anyị ebe a bụ ịgwa gị ụlọ ahịa ndị a yana Ezigbo akụkọ banyere ndị egwuregwu South America.
Gịnị kpatara anyị ji lekwasị anya na Akụkọ banyere South America Football?
N'ime ọtụtụ afọ, anyị achọpụtala nsogbu a ma ama nke dị na weebụ gbasara akụkọ football. Onwere ihe omuma banyere ihe kwesiri igha ndi mmadu banyere ndi South America.
Na obere ụzọ anyị si enye aka, ndị otu anyị kpebiri ịtọ ụdị ndị South America n'afọ 2016. Ugbu a, anyị nwere obi mgbawa na iwepụta Akụkọ hoodmụaka na Eziokwu Akụkọ ndụ nke Ndị South America.
Nyochaa na Edemede South America anyị
Iji bido, isiokwu nile a kwadebere gbasara ndị ama ama ama na mpaghara na-enwe ezi uche dị na ya. N'okwu dị mfe, ọdịnaya South America anyị na-agwa gị ihe ndị a.
Nke mbu, anyi ewetara gi akuko banyere ndi ha n’agba egwu, site na mgbe amuru ha na ndu ha.
Anyị na-ewetara gị ozi gbasara etu ezinụlọ si malite na South America Ndị na-egwu egwuregwu. Nke a nwekwara ozi gbasara ndị mụrụ ha (papa na nne).
Nke ato, anyi na agwa gi ihe ndi mbu Life mere nke omumu banyere oru ndi ndi South America.
Ihe ọzọ bụ na akụkọ ahụ na-aga n'ihu na ahụmịhe ndị mbụ ha mere.
Roadzọ anyị si Akụkọ Mere Eme na-akọwa ntakịrị nke ndị egwuregwu South America na-agba ụkwụ na-achọ ihe ịga nke ọma.
Mgbe ahụ, Rise to Fame Story gị na-agwa gị akụkọ banyere ha na-aga nke ọma.
Anyị na-aga n’ihu ime ka gị na Storieshụnanya Akụkọ nke ndị egwuregwu South America. N'ebe a, anyị ejedebeghị ozi gbasara ụmụ nwanyị na nwunye ha.
Nke ozo bu eziokwu banyere ndu nke ndi egwuregwu ndi South America
Anyị na-emekwa ka ị mata ndị ezin’ụlọ ha, ndị ikwu ya na mmekọrịta ezinụlọ ọzọ
Ndị otu anyị na –egosipụta ihe ha na - enweta, ezigbo ọnụ ahịa na ụzọ ndụ ha.
Nke ikpeazu abughi ndepụta ahụ, anyị ga-ewetara gị akụkọ Untold Fact ị na-amabeghị na o nwere ndị egwuregwu South America.
Ka ọ dị ugbu a, anyị agbajikwa ụdị egwuregwu bọọlụ South America n'ime ngalaba ndị a. Ha gụnyere;
Mgbe imutala ebumnuche anyị, ị ga-achọpụta nke ahụ LifeBogger kwenyere n'echiche nke imechi oghere ndị dị na ntọala ihe ọmụma Akụkọ nwata na Eziokwu Akụkọ ndụ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụghị ihe niile banyere ikiri egwuregwu ahụ kama ịmara akụkọ ndị dị n'azụ aha ndị ahụ dị ukwuu na pitch.
Anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi mgbe anyị na-arụ ọrụ anyị kwa ụbọchị. Obiọma Kpọtụrụ Anyị ma ọ bụrụ na inyocha okwu (s), njehie (s) ma ọ bụ nhapụ (mbibi) ọ bụla n'akwụkwọ anyị gbasara ndị egwuregwu Latin America.
Na ngwụcha, anyị na-ewetara gị akụkọ nwata na akụkọ eziokwu gbasara ndị egwuregwu bọọlụ Latin America.
Editọ LifeBogger - Bọchị gbanwee: Eprel 15, 2020
Editọ LifeBogger - Bọchị gbanwee: Eprel 15, 2020 1
123...8Page 1 nke 8